Home News Muqdisho oo Amni Xumo darteed Habeenkii wax dhaqdhaqaaq ah uusan ka Jirin...
Muqdisho oo Amni Xumo darteed Habeenkii wax dhaqdhaqaaq ah uusan ka Jirin iyo Cabsi Taagan!!
Sida ay ogaatay Muqdisho Online waxaa Xaafadaha kala duwan ee degmooyinka Gobolka Banaadir ka taagan Amni Xumo aad u baaxad weeyn,taasi oo ayna dadku ku dhiiran Karin in ay Socdaan xiliyada habeenkii ah.
Degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa Xiliyada Habeenkii ah waxaa aad u yaraaday isku Socodka Gaadiidka iyo Dadweeynaha,waxaana taas lagu sababeeyay Amni xumada dalka ka jirta oo hada mareeysa heerkii ugu weeynaa ama ugu sareeysayba.
Muqdisho Online oo u kuur-gashay Xaqiijinta arintaani ayaa waxaa ay ogaatay in Taliyayaasha degmooyinka ee Booliska xitaa in aysan shaqeeyn Habeenkii iyagoo Ka baqdin qaba in la weeraro.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka doodayo Amniga qaranka,waxaana ay soo bandhigeen qataro amni oo dalka ka jira,waxaasa aysan wali xusan Arintaani
Previous articleDEG DEG:Kooxo hubeysan oo dil Goordhow ka geestay Muqdisho
Next articleWAR DEG DEG:Waare oo sheegay in uu farmaajo iyo kheeyre la heshiiyay+Dhageyso
Taiwan congratulates African ally for holding first parliamentary election since 2005
Degmooyin ka Tirsan Gobolka Banaadir oo Amni Xumo looga Guuraayo”Ma isku...